News | gore
News | Tag: gore
३३ किलो सुनकाण्डका नाइके गोरेको सहयोगी भारतमा पक्राउ
काठमाडौँ । भारतको कोलकोतामा समातिएको ३३ किलो सुनको बारेमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । भारतीय प्रहरीद्वारा विषेश सूचनाका आधारमा कोलकोताबाट उक्त सुन समातिएपछि नेपाल प्रहरीले नेपालबाट गायब भएको ३३ किलो सुन भारतीय प्रहरीले बरामद गरेको सुनको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
सुन तस्करी प्रकरणः दुबईमा गोरेका भाइ समातिए
काठमाडौं । तीन हजार आठ सय किलो सुन तस्करीका फरार अभियुक्त भनिएका रमेश उप्रेतीलाई दुबई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको संस्था (इन्टरपोल)को शाखा कार्यालय दुबईले रमेशलाई एक साताअघि पक्राउ गरेको हो ।
कहाँ पुग्यो सनम शाक्यको हत्या र साढे ३३ किलो सुन प्रकरण ?
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका मुख्य तीन प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालत मोरङले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन आइतबार आदेश दिएको छ ।
३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण !
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीहरूले सनम शाक्यको हत्या र ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको विशेष समितिको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् ।